Ogaden News Agency (ONA) – Malcom Bruce MP gudoomiyaha gudida deeqda caalamiga ee UK oo la kulmay Jaaliyadda Ogadenya iyo shucuubta Itobiya ee ku dhaqan UK
Malcom Bruce MP gudoomiyaha gudida deeqda caalamiga ee UK oo la kulmay Jaaliyadda Ogadenya iyo shucuubta Itobiya ee ku dhaqan UK
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka UK ayaa waxa ay gudbiyeen Petition ay u gudbiyeen Wasaarada Deeqda Caalamiga ee wadanka UK. Petitionkan ayaa waxa weheliyay jaaliyada Somalida Ogadeniya Qowmiyadaha Ethiopia oo ay kamid yihiin Oromada, Axmaarada, Qowmiyadaha koonfurta.
waxa hadaba qaabilay Gudoomiyaha deeqda Caalamiga ah ee wadanka UK xildhibaan Malcom Bruce oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka wadankan UK kana mid ah Xisbiga Liberalka. Gudomiyaha deeqda caalamigu waxa uu ka aqbalay Jaaliyaadka Somalida Ogadeniya iyo qowmiyadaha Ethiopia warqado ay ku saxeexanyihiin tiro aad u badan oo ay kaso qaadeen shucuubta ethiopia ee ku dhaqan wadanka UK.
Malcolm Bruce ayaa sheegay in Haayada uu madaxda ka yahay ee Deeqda Caalamiga ahi muddo laga joogo 4 sano ay tageen Ethiopia gaar ahaan Ogadeniya. Waxa uu yiri waxa aad ugu faraxsanahay in aad codkina soo gudbiseen idinka oo raba in aad wax kaqabataan dhibaatooyinka xuquuql insaan iyo dadka ku tabaleysan ethiopia. Waxa aan idiin balan qaadaya in aan gaarsiiyo codsigiina meesha ugu sareysa jawaabo wax ku ool ahna aad heshaan. Waxa balan qadaya ayuu yiri in Guriga Baarlamaaka iyo Wasiirka Department of international development iyo Wasarada Arrimaha Dibadaba ay gaari doonaan waraqahani.
Xidhibaan Malcolm Bruce ayaa intaas saxaafada u sheegay kadibna waxa uu 16 qof oo xul ah jaaliyadaha Somalida Ogadeniya iyo Shucuubta kale ee Ethiopia la qaateen shir hoose oo ka dhacay Gudaha Baarlamaanka UK. Shirkaas ayaa waxa lagu su’alay 6 su’aalood oo saddex kamid ahi weydiyeen jaaliyada somalida Ogadeniya.
su’alaha laweydiiyay ayaa waxa kamid ahaa. Ururka ONLF iyo Haayadaha Xuquuql insaanka waxa ay soo gudbiyeen cabasho ay ku sheegayaan in gargaarka wadamada deeqda ah siiyaan dadka tabaaleysan ee somalida Ogadeniya in la leexsado oo Ciidamada ethiopianku siyasadeyaan islamarkaasna aysan gaarin shucuubti loogu talo galay. dhalecayntaas dowlada Wadanka UK wax baadhitaan ah maku sameysay, hadey sameysayna maxaa kasoo baxay oo aad noo sheegi kartaa.
waxa kale oo la weydiiyay xasuuqa ciidamada ethiopianku ka geystaan dhulka Somalida ogadeniya dowlada UK wax cadaadis ah oo ay saartay Ethiopia ma jirta hadey jirto se maxay yihiin talaabooyinkaasi. Waxa intaas dheer oo la weydiiyay in dhulka somalida Ogadeniya loo ogoleyn haayadaha gargaarka oo laga hor istaagay laanqeyrta cas, waqti dhibaatoyin abbaaro ka jiraan Ogadeniya.
Su’alaahas iyo su’alo badan oo kale ayaa la hor dhigay Gudoomiyaha deeqda Caalamiga ah u qaabilsan wadanka UK. Waxa uuna Malcolm Bruce soo dhaweeyay dhamaan su’alihi laweydiiyay waxa uuna u balan qaaday in faah faahin dheeraad ah oo ah mowqifka wadanka UK (Oficial ah) in lasiin doono sida ugu dhaqso badan. su’alahan oo dhan ayaa ah su’alo u baahan jawaabo dag-dag ah waana su’alo macquul ah.
Shirkan ayaa waxa wehlinayay jaaliyada Somalida Ogadeniya iyo shucuubta qowmiyadaha Ethiopia hayado xuquuql insaan iyo saxiibo u dhashay wadanka UK oo taagersan arrimaha Ogadeniya. Waxa kale oo goob joog ka ahaa TV-yada waaweyn ee wadankan iyo warbaahinta Press TV.
Hadaba shirkaas oo faah faahsan maqal iyo muuqaal ah waxa aad ka daawataan ilaystv.com
waa tallaabo wanaagsan ooy qaadeen jaaliyadda reer Ogaadeeniya ee UK.